Waa kuma ama waa maxay Ruuxa Quduuska ahi?
Ruuxa Qudduuska ahi waa qofka saddexaad ee ilaahanimada weligiisna wuxuu ka yimaadaa xagga Aabbaha xagga Wiilka. Isagu waa gargaaruhu wuxuu ballanqaaday Ciise Masiix inuu Ilaahay u soo diray dhammaan rumaystayaasha. Ruuxa Quduuska ahi wuu inagu dhexjiraa, wuxuu inagu mideeya aabaha iyo wiilka, oo wuxuu na beddelaa tawbadkeen iyo isdaahirinta, iyo cusboonaysiinta joogtada ah, wuxuu inagu raaciyaa muuqaalka masiixa. Ruuxa Quduuska ahi waa isha laga helo dhiirrigelinta iyo sheegidda ee Kitaabka Quduuska ah waana isha midnimada iyo bulshada ee Kaniisadda. Wuxuu siiyaa hadiyado ruuxi ah xagga shaqada injiilka waana tusaha joogtada ah ee Masiixiyiintu ku hayaan runta oo dhan (Yooxanaa 14,16:15,26; 2,4.17:19.38; Falimaha Rasuullada 28,19: 14,17, 26-1; Matayos 1,2:3,5; Yooxanaa 2: 1,21-1; 12,13 Butros 2: 13,13; Tiitos 1: 12,1, 11 Butros 20,28:16,13,) Korintos; Korintos; Korintos; Fal; Yooxanaa).
Ruuxa Quduuska ah - shaqadiisa ama shaqsiyan?
Ruuxa Qudduuska ah waxaa badanaa lagu sharaxaa marka loo eego shaqooyinka, sida T. Awooda Ilaah ama joogitaankiisa ama ficilkiisa ama codkiisa. Miyay tani tahay hab ku habboon oo lagu sharraxo maskaxda?
Ciise waxaa sidoo kale lagu tilmaamay inuu yahay xoogga Ilaah (Filiboy 4,13), jiritaanka Ilaah (Galatiya 2,20), ficilka Eebbe (Yooxanaa 5,19) iyo codka Ilaah (Yooxanaa 3,34). Laakiin waxaan uga hadlaynaa Ciise xagga shakhsiyadda.
Qorniinku sidoo kale wuxuu astaamihiisa shakhsiyan u yahay Ruuxa Quduuska ah oo markaa ka dib kor u qaadaya muuqaalka Ruuxa oo ka sarreeya shaqadiisa. Ruuxa Quduuska ahi wuxuu leeyahay dardaaran (1 Korintos 12,11: "Laakiin waxaas oo dhammi waa isku mid, waxayna siisaa qof walba waxay doonayaan"). Ruuxa Quduuska ahi wuxuu baaraa, ogaadaa, baraa oo kala saaraa (1 Korintos 2,10: 13).
Ruuxa Quduuska ahi wuxuu leeyahay shucuur. Ruuxa nimcada waa la caajin karaa (Cibraaniyada 10,29) iyo murugo (Efesos 4,30). Ruuxa Quduuska ahi wuu na qalbi qaboojiyey oo sidii Ciise oo kale ayaa loo yeedhay caawiye (Yooxanaa 14,16). Meelaha kale ee Qorniinka, Ruuxa Quduuska ahi wuu hadlayaa, amraa, wuu marag furaa, been baa loo leeyahay, wuuna dhacaa. Shuruudahan oo dhami waxay ku wada habboon yihiin shakhsiyadda qofka.
Hadal ahaan, maskaxdu maahan waxa laakiin waa. Maskaxdu waa "qof", maahan "wax". Inta badan wareegyada masiixiga, Ruuxa Quduuska ah waxaa loogu yeeraa "he", oo aan loo fahmin inuu yahay tilmaam jinsi. Waxaase loo isticmaalaa in lagu muujiyo shakhsiyadda maskaxda.
Ilaahnimadiisa ee ruuxa
Baybalku wuxuu sifooyinka rabaani ah ugu tilmaamaa Ruuxa Quduuska ah. Laguma sharaxay inuu leeyahay malaa'ig ama dabeecadda aadanaha.
Ayuub 33,4 wuxuu xusayaa: "Ruuxa Ilaah waa i abuuray, Oo neefta Ilaaha Qaadirka ah ayaa i noolaynaya." Ruuxa Quduuska ah ayaa abuuraya. Maskaxdu waa waara (Cibraaniyada 9,14). Waa goobjoog (Sabuurradii 139,7).
Baadhista kutubta oo waxaad arki doontaa in maskaxdu wax walba awood leedahay, wax walba ogtahay oo ay nolosha siineyso. Dhammaan kuwan waa sifooyinka dabeecadda rabbaaniga ah. Sidaa daraadeed Baybalku wuxuu ugu yeeraa Ruuxa Quduuska ah rabaani ah.
Ilaah waa mid
Barista aasaasiga ah ee Axdiga Cusub waa in Ilaah jiro (1 Korintos 8,6; Rooma 3,29-30; 1 Timoteyos 2,5; Galatiya 3,20). Ciise wuxuu tilmaamay in isaga iyo aabuhu ay wadaagaan ilaahnimadu (Yooxanaa 10,30).
Haddii Ruuxa Quduuska ahi yahay "qof", isagu ma Ilaah gaar ah baa? Jawaabtu waa inay ahaataa maya. Haddii ay sidan ahaan lahayd, markaa Ilaah maysan noqon lahayn.
Qorniinka Quduuska ah wuxuu ka hadlayaa Aabbaha, Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah oo leh magacyo isku miisaan ku leh dhismaha xukunka.
Matayos 28,19:2 waxay leedahay: "... iyaga ku baabtiisa magaca Aabaha iyo kan Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah". Saddexda magac waa kala duwan yihiin oo isku qiimo ayey leeyihiin. Sidoo kale, 13,14 Korintos, Bawlos wuxuu tukanayaa "nimcada Rabbigeenna Ciise Masiix iyo jacaylka Ilaah iyo wehelnimada Ruuxa Quduuska ahu kulligiin ha idinla jireen". Butros wuxuu sharxayaa in Masiixiyiintu “lagu doortay by quduusnaanta Ruuxa inay addeecaan oo lagu rusheeyo dhiiggii Ciise Masiix” (1 Butros 1,2).
Sidaa darteed, Matayos, Bawlos, iyo Butros ayaa si cad u gartay kala duwanaanshaha u dhexeeya Aabbaha, Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah. Bawlos wuxuu u sheegay kuwa ku beddelay Korintos in ilaahnimadu run tahay aysan ahayn wax ilaahyo laga soo uruuriyay (sida pantheon Griiga) meesha qof walbaa ku siiya hadiyado kala duwan. Ilaah waa isku mid oo waa “hal [isku] isku ruux… mid keliya ayaa ah Sayid… hal [isku mid ah] waa Ilaah kan ka wada shaqeeya wax walba” (1 Korintos 12,4: 6). Bawlos mar dambe ayuu sharraxaad dheeri ah ka bixiyay xiriirka ka dhexeeya Ciise Masiix iyo Ruuxa Quduuska ah. Iyagu maahan laba qaybood oo kala duwan, dhab ahaantiina isagu wuxuu leeyahay "Sayidka" (Ciise) «waa ruuxa» (2 Korintos 3,17).
Ciise wuxuu yidhi in Ilaaha Aabbaha ahu u soo diri doono Ruuxa runta si Aabbuhu ugu noolaado rumaystaha (Yooxanaa 16,12-17). Ruuxu wuxuu tixraacaa Ciise oo wuxuu xusuusiyaa aaminka ereyadiisa (Yooxanaa 14,26) oo waxaa Aabbaha laga soo diray isagoo ka maraya Wiilka si uu uga marag furo badbaadada Ciise suurtagelinayo (Yooxanaa 15,26). Sida aabbaha iyo wiilku u yihiin hal, wiil iyo ruuxuna waa isku mid. Oo anaga oo u diraya Ruuxa, Aabbuhu wuu inagu dhex jiraa.
Dhimashadii rasuulladii Axdiga Hore kadib waxaa kaniisada dhexdeeda laga wada hadlay sidii loo fahmi lahaa cibaadada. Caqabada waxay ahayd in la ilaaliyo midnimada Eebbe. Sharraxaadyo kala duwan ayaa dejiyay fikradaha "bi-theism" (laba ilaah - aabbe iyo wiil, laakiin maanka ayaa ah oo kaliya wax u qabashada ama labadaba) iyo saddex-theism (Saddex ilaah - aabbe, wiil iyo ruux), laakiin tani waxay ka hor imaaneysaa cibaadada aasaasiga ah ee laga helay labadaba Axdiga Hore iyo Axdiga Cusub. (Malaakii 2,10, iwm.).
Saddexanka, waa erey aan ka helin Kitaabka Quduuska ah, waana tusaale ay soo saareen Aabayaashii kaniisadihii hore si ay u sharxaan sida Aabaha, Wiilka, iyo Ruuxa Quduuska ahi ay xiriir ula leeyihiin midnimada Eebbe. Waxay ahayd difaaca Christian ka dhanka ah "tri-theistic" iyo bidcinimada "bidcinimo", iyo waxay la dagaallantay sanamyada jaahilka.
Metaphors si buuxda uma qeexi karto Ilaah inuu yahay Ilaah, laakiin waxay naga caawin karaan inaan helno fikrad ah sida loo fahmo Trinity-ka. Sawirku waa soo-jeedinta in qofku yahay saddex shay hal mar: Waa sida nafta qofka (Wadnaha, kursiga shucuurta), jirka iyo maskaxda (Maanka), Ilaah waa aabbaha naxariis leh, wiilka (ilaahnimadu ha ahaato - eeg Kolosay 2,9,), iyo Ruuxa Quduuska ah (yaa fahmaya kaliya waxyaalaha rabaani ah - eeg 1 Korintos 2,11).
Tixraacyada Baybalka ee aan horay ugu isticmaalnay daraasaddan ayaa baraya runta in Aabaha iyo Wiilku iyo Ruuxu ay yihiin dad kala duwan oo ka mid ah ilaahnimada. Tarjumaadda NIV ee Kitaabka Quduuska ah ee Ishacyaah 9,6 waxay muujineysaa fikir Saddexdannimo ah. Cunugga dhalanaya wuxuu noqonayaa "la-taliye cajiib ah" (Ruuxa Quduuska ah), «Ilaaha xoogga badan» (ilaah), "Aabaha awooda leh" (Ilaaha Aabbaha ah) iyo "Amiirka Nabadda" Waxaa loogu yeeray (Ilaah wiilka).
Saddexanka ayaa si kulul loogu dooday jihooyinka fiqi ahaaneed ee kala duwan. Markaa z. Tusaale ahaan, aragtida reer galbeedka ayaa ah mid sii kala sarreysa iyo mid aan rasmi ahayn, halka aragtida Bari ay had iyo jeer dhaqdhaqaaq ka dhex jirto bulshada Aabaha, Wiilka, iyo Ruuxa Quduuska ah.
Cilmiga fiqiga ayaa ka hadlaya midnimada bulshada iyo dhaqaalaha iyo fikradaha kale. Si kastaba ha noqotee, aragti kasta oo u maleynaya in aabaha, wiilka iyo ruuxdu ay leeyihiin rabitaan gooni ah ama rabitaan ama jiritaan waa inay ahaadaan been (oo sidaas daraaddeed faasiqnimo ah) maxaa yeelay, Ilaah waa mid. Waxaa jira jacayl kaamil ah oo firfircoon, farxad, wada noolaansho iyo midnimo buuxda oo xagga xidhiidhka ka dhexeeya aabbaha, wiilka iyo ruuxa.
Doctrine Trinity wuxuu tusaale u yahay fahamka Aabaha iyo Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah. Dabcan, uma caabudno caqiido ama tusaalooyin. Waxaan ku caabudaynaa Aabaha "ruux ahaan iyo run" (Yooxanaa 4,24). Fiqi ahaan soo jeedinaya in ruuxu helayo qaybtiisa cadaaladda ah waa mid shaki leh maxaa yeelay ruuxu ma soo jiito dareenkiisa laakiin wuxuu ammaanayaa Masiixa (Yooxanaa 16,13).
Axdiga Cusub dhexdiisa, salaadda waxaa aasaaska hore looga hadlay aabaha. Qorniinku uma baahna in aan ku barinno Ruuxa Quduuska ah. Markaynu tukanay Aabbaha, waxaynu u tukanaa Ilaaha saddexanka ah - Aabbaha, Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah. Waxyaabaha kala duwan ee ilaahdu maahan saddex ilaah, mid walbana wuxuu ubaahan yahay gooni gooni, tixgalin qadarin leh.
Intaa waxa u dheer, duceeynta iyo ku baabtiista magaca Ciise waa isku mid sida sameynta magaca Aabaha, Wiilka, iyo Ruuxa Quduuska ah. Baabtiiska Ruuxa Quduuska ahi kama duwanaan karo baabtiiskii Masiixa amaba qiimo weyn buu yeelan karaa maxaa yeelay Aabbaha, Rabbi Ciise iyo Ruuxu waa isku mid.
Hel Ruuxa Quduuska ah
Ruuxdu waxay ku qaaddayaan qof walba oo iimaan leh oo toobad keena oo lagu baabtiiso magaca Ciise dembidhaafka (Falimaha Rasuullada 2,38:39, 3,14; Galatiya). Ruuxa Quduuska ahi waa ruuxa carruurnimada [qaadashada] ee Ruuxa ku marag furaa inaannu innagu nahay carruurta Ilaah (Rooma 8,14: 16), waxaana nalooga shaabadeeyey Ruuxa Quduuska ah oo loo ballanqaaday, kaas oo ah yabooha dhaxalkeenna ruuxiga ah (Efesos 1,14).
Haddii aan haysanno Ruuxa Quduuska ah, markaa innagu waxaynu nahay kuwa Masiix (Rooma 8,9). Kaniisadda masiixiga waxaa la barbar dhigayaa macbudka Ilaah maxaa yeelay Ruuxu wuxuu ku dhex noolyahay rumeeyaasha (1 Korintos 3,16).
Ruuxa Quduuska ahi waa Ruuxa Masiixa ee dhiirrigeliyay nebiyadii Axdigii Hore (1 Butros 1,10: 12) kaas oo daahirinaya nafta Masiixiyiinta addeeca runta (1 Butros 1,22), oo awood u leh badbaadada (Luukos 24,29), quduus ka dhig (1 Korintos 6,11), waxay soo saartaa miro rabbaani ah (Galatiya 5,22: 25), iyo waxay noo qalabaysaa si aan u faafinno injiilka oo aan u dhisno Kaniisadda (1 Korintos 12,1: 11-14,12; 4,7:16; Efesos 12,4: 8; Rooma).
Ruuxa Quduuska ahi wuxuu ku hagaan runta oo dhan (Yooxanaa 16,13), oo indhahaaga u fur dunida oo dhan dembiga iyo caddaaladda iyo xukunka » (Yooxanaa 16,8).
Runta kitaabiga ah ee runta ah waa in Ilaah yahay Aabaha, Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah, qaabeeyaa iimaankeena iyo nolosheena Masiixiyiinta. Wehelnimada cajiibka ah ee quruxda badan ee ay wadaagaan Aabbaha, Wiilka iyo Ruuxu waa wehelnimada jacaylka kaas oo Badbaadiyeheenna Ciise Masiix na dhex geliyay jidh ahaan xagga noloshiisa, dhimashadiisa, sarakiciddiisa iyo ubaxnimadiisa.